အီလက်ထရွန်-volts (EV) ကိုကီလိုဂျင့် (Kev) စွမ်းအင် converter သို့
Result in kiloelectron-volts: keV
အီလက်ထရွန်-volts (ev) ကီလိုဂျီသွန်း (Kev) Volts (Kev): 1ev = 0.001kev
ရူပဗေဒတွင် Electron Volt (Electron Volt) သည်ခန့်မှန်းခြေအားဖြင့် 1.6 × 10-19 joule (သင်္ကေတ 10) နှင့်ညီမျှသောစွမ်းအင်တစ်ခုဖြစ်သောစွမ်းအင်ဖြစ်သည်။ အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ဆိုချက်အရ၎င်းသည်အီလက်ထရွန်တစ်မျိုးတည်းကိုဗို့အားဖြင့်လျှပ်စစ်အလားအလာရှိသောခြားနားချက်ကို ဖြတ်. ပြောင်းရွှေ့ခြင်းအားဖြင့်ရရှိသောစွမ်းအင်ပမာဏဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်၎င်းသည် Elradary Charge Carr. (E, OR 1.60217656665656565) × 10 <7 sups> -19 × 10 -19 <1 × 10 -19 c) ။ ထို့ကြောင့်, အီလက်ထရွန်ဗို့သည် 1.602176565 (35) × 10 -19 နှင့်ညီသည်။ သမိုင်းကြောင်းအရအီလက်ထရွန်ဗို့အားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားအမှုန်အရှိန်မြှင့်အမှုအရာရှိအမှုန်များ၌အသုံး0င်သည် အားသွင်း Q တွင်စွမ်းအင် E = QV တွင်စွမ်းအင်အီး = QV တွင်ပါ0င်သည်။ အကယ်. Q သည်မူလတန်းငွေချေးစာချုပ်များ၏ကိန်းဂဏန်းများနှင့် Volts ရှိ terminal ဘက်လိုက်မှုဆိုင်ရာအချက်အလက်များတွင်ကိုးကားလျှင် EV စွမ်းအင်တစ်ခုရရှိသည်။